November 2019 : Snacks Mandalay
By Snacks Mandalay | November 29, 2019 | 0
🌶🌶🌶 အရောင်ပါဝင်သော မှိုတက်ငရုတ်သီး (သို့မဟုတ်) ကင်ဆာ 🥗🥗🥗 ဆိုးဆေးပါတယ် မှိုတက်နေတဲ့ ငရုတ်သီးတွေကိုစားမိတဲ အခါ 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ အစာအိမ်ရောင်လာမယ် 😢😢😢 သွေးအန်တာတွေဖြစ်လာမယ် 🖤🖤🖤 တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသည်းကိုထိခိုက်လာမယ် 🌶🌶🌶 ငရုတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ အယ်ဖာတောက်ဆင် (မှိုအဆိပ်) ကအသည်းကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ် ❤❤❤ အသည်းထဲမှာ အရွက်တည်ခြင်း ၊ အသည်းကြွပ်၊ အသည်းခြောက်ခြင်း တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် (အရက်သောက်မှ အသည်းခြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်) နောက်များတွင်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Three Stars Page ကို Like and Share လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် 🌶🌶🌶အရောငျပါဝငျသောမှိုတကျငရုတျသီး (သို့မဟုတျ) ကငျဆာ🥗🥗🥗ဆိုးဆေးပါတဲ့ မှိုတကျနတေဲ့ ငရုတျသီးတှကေိုစားမိတဲ့အခါ🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️အစာအိမျရောငျလာမယျ😢😢😢သှေးအနျတာတှဖွေဈလာမယျ🖤🖤🖤တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အသညျးကိုထိခိုကျလာမယျ🌶🌶🌶ငရုတျသီးမှာပါဝငျတဲ့ အယျဖာတောကျဆငျ (မှိုအဆိပျ) က အသညျးကိုဆိုးရှားစှာထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ❤❤❤အသညျးထဲမှာ အရှကျတညျခွငျး ၊…
By Snacks Mandalay | November 27, 2019 | 0
၁. ဂျင်းနှင့် သံပုယိုရည်ဂျင်း၊ သံပုယိုရည် နှစ်မျိုးစလုံးမှာ အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိကြတယ်။ဒီနှစ်မျိုးကိုသာတွဲဖက်စားသုံးမယ်ဆိုရင် တွေ့သမျှအစားအစာတွေကိုလျောက်မစားချင်တော့မှာအသေအချာပါပဲ။ ၀ိတ်ချဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုပုံဂျင်းရည်ထဲကို သံပုယိုရည် ညစ်ထည့်ပါ။ တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိ သောက်ပေးပါ။ သို့မဟုတ် ဂျင်းနှင့် သံပုယိုရည်ကိုရောပြီး ရေထဲစိမ်သောက်လျှင်လည်းအဆင်ပါတယ်။ ၂. ပန်းသီးရှာလကာရည်နှင့် ဂျင်းပန်းသီး ရှာလကာရည်ဟာ အရသာပြင်းတဲ့အတွက် သူ့ချည်းပဲသောက်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် ဂျင်းနဲ့တွဲဖက်သောက်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို အဆင်ပြေလှပါတယ်။ အသုံးပြုပုံနှစ်မျိုးစလုံးကိုမွေစက်ထဲရောမွေပြီး သောက်သုံးလို့လည်းရသလို ပန်းသီးရှာလကာရည် လဖ္ဘက်ရည်ဇွန်း ၅ ဇွန်း ကို ဂျင်းရည်ထဲ ထည့်ပြီးသောက်သုံးရင်လည်းရပါတယ်။ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးပေးပါ။ ၃. Green Tea နှင့် ဂျင်းGreen Tea ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ သိပြီးကြလောက်ပြီပေါ့၊ ၀ိတ်လည်းကျတော့ ဂျင်းနဲ့သာတွဲဖက်သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကတော့ လျင်မြန်စွာဝိတ်ကျစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့နှပ်နေတဲ့အချိန်မှာ…
By Snacks Mandalay | November 22, 2019 | 0
အိမ်ရှင်မတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဂျင်းအကြောင်းအချက် (၇) ချက် ၁ – မွနျမွနျအစာကွလှေယျစခွေငျး ၂ – အအေးမိခွငျး၊ ပြို့အနျခွငျး မြားကိုသကျသာစခွေငျး ၃ – မကျြနှာရှိအမညျးစကျမြားကို အလှယျတကူဖယျရှားပေးနိုငျခွငျး ၄ – ရောငျရမျးမူတှကေို သကျသာစခွေငျး ၅ – သှေးဖိအားလြော့နညျးစပွေီး နှလုံးရောဂါကို ကာကှယျပေးခွငျး ၆ – ကငျဆာကိုတိုကျခိုကျပေးခွငျး ၇ – အရေးအကွီးဆုံးကတော့ မိနျးကလေးမြား အတှကျ ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာခွငျးမြားကို သကျသာစခွေငျးတို့ပဲဖွဈပါတယျ ၁ – မြန်မြန် အစာကြေလွယ်ခြင်း ၂ – အအေးမိခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းများကို သက်သာစေခြင်း ၃ – မျက်နှာရှိအမည်းစက်များကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း ၄ – ရောင်ရမ်းမှုများကိုသက်သာစေခြင်း ၅ – သွေးဖိအားလျော့နည်းစေပြီး နှလုံးရောဂါကိုကာကွယ်ပေးခြင်း…